Root Lorcaserin HCL Powder (846589-98-8) Soosaarayaasha - Phcoker
Budada Raw Lorcaserin hydrochloride waa serotonin 2C (5-HT2C) agonist soo-qaadaha iyo daawada afka laga qaato ee kobcinta….
Video Raw Lorcaserin HCL (846589-98-8) video
Raw Lorcaserin HCL budada (846589-98-8) Qeexitaannada
Product Name Raw Lorcaserin Hydrochloride budada
Magaca Kiimikada Raw Lorcaserin HCL budada, Lorcaserin
Fasalka Daroogada 5-HT2C daaweeye-celiyaha
Molecular Wsideed 232.15
Biological Life-Life Nolosha nuska ah ee lorcaserin waa qiyaastii saacadaha 11. Dufanka lorcaserin ayaa laga jarayaa inta badan kaadida (92%) iyo saxarada (2.2%)
milmi Biyaha Solubility: 0.0709 mg / mL
kaydinta Temperature -20 ° C.
Application Serotonin 2C (HT2C) Agonist oo loogu talagalay miisaan lumis ah. Waxay yareysaa isticmaalka cuntada iyo kor u qaadida saturada
Raw Lorcaserin HCl budada (846589-98-8) Sharaxaad
Budada Raw Lorcaserin hydrochloride waa hydrochloride oo lagu helo falcelinta budada lorcaserin oo leh hal u dhiganta hydrochloric acid. Waxaa loo adeegsaday daroogada ladagaalanka buurnida Lorcaserin hydrochloride waa 5HT2c agonist receptor agonist oo loogu talagalay in loogu isticmaalo dadka waaweyn ee leh BMI ≥30, ama kuwa leh BMI ≥27 iyo ugu yaraan hal xaalad la xiriirta miisaanka sida dhiig karka, nooca sonkorowga 2 ama dyslipidemia. waxay keentaa dareen dhereg, waxaana loo maleynayaa in laga fogaado roobka cudurada wadnaha wadnaha ee laxiriira firfircoonida 5-HT2B soo-dhoweeyeyaasha, aagga maskaxda lagu yaqaan inay door weyn ka ciyaaraan nidaaminta gaajada iyo cunnada. Markaad dhaqaajiso soo-dhoweeyayaashan, budada 'Lorcaserin hydrochloride budada' waxay hoos u dhigi kartaa cunnada cunnada iyadoo hoos loo dhigo rabitaanka cuntada iyo in qofku dareemo inuu dheregsan yahay xitaa markuu cuno cunto ka yar tii caadiga ahayd. ayaa maanta lagu ansixiyay FDA go'aan taariikhi ah ka dib 2 sano oo baaris ah.
Lorcaserin hydrochloride waxay si gaar ah u tilmaameysaa in ay tahay nafaqo yar oo kalooriye ah iyo firfircoonida jirka ee miisaanka culus ee dadka waaweyn ee qalliinka ah (BMI ee 30 kg / m2 ama ka weyn) iyo dadka waaweyn ee culeyska (BMI of 27 kg / m2 ama ka weyn) iyadoo ugu yaraan hal xaaladood oo miisaanka la xidhiidha.
Kiniin Lorcaserin hydrochloride waxaa loo isticmaalaa cuntada iyo jimicsiga si loo daaweeyo cayilka. Mararka qaarkood waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cayilka oo laga yaabo inuu la xiriiro sonkorowga, kolestaroolka sare, ama dhiig kar.
Lorcaserin hydrochloride ma daaweyn doonto xaalad caafimaad oo hoose (sida cudur wadne, sonkorow, cadaadis dhiig oo sarreeya). Hayso qaadashada dawooyin kale oo dhakhtarkaagu kuu qoray daaweynta xaaladahaas.
Lorcaserin HCl budada (846589-98-8) Mashruuca Hawlaha
Inkastoo nidaamka saxda ah aan la ogeyn, waxaa la rumeysan yahay in uu ku lug yeesho dhaqdhaqaaqa xeeladeysan ee 5-HT2C ee dhexdhexaadiyeyaasha anorexigenic pro-opiomelanocortin neurons oo ku jira nucleuska wadnaha ee hypothalamus. Tani waxay sababtaa hoos u dhaca helitaanka raashinka iyo fadeexada iyadoo la dhiirigelinayo sii deynta alfa-melanocortin kicinta hormoonka, taas oo wax ka qabta reseptors melanocortin-4.
Budada Lorcaserin hydrochloride waxay ku shaqeysaa iyada oo la xakameynayo rabitaanka cuntada - gaar ahaan iyadoo la kicinayo soo dhaweynta maskaxda ee serotonin, neurotransmitter oo kicisa dareenka dhereg iyo qanacsanaanta. Qaadashada cuntada waxaa gacanta ku haya xarun dhereg leh, oo ku taal xudunta ventromedial ee hypothalamus iyo xarunta gaajada ee ku taal hypothalamus lateral. Waxyaabo kala geddisan oo laga helo xarumaha sare iyo marinnada caloosha ee caloosha ayaa isku urursada nukleus arcuate, halkaas oo ay ku yaalliin laba nooc oo neerfayaal xakameynaya qaadashada cuntada. Marka hore, kooxda dhiirrigelinta qaadashada cunnada ee soo saarta borotiinka la xiriira agouti iyo neuropeptide Y; iyo tan labaad, kooxda kahortaga qaadashada cuntada ee ay kujiraan kookaha iyo amphetamine transcript sharciyeysan (CART) iyo pro-opiomelanocortin (POMC) neurons. POMC wuxuu ka kooban yahay 5-HT 2C qabtayaal, oo markii la hawlgaliyo sii deynaya hormoonka alfa-melanocyte-kicinta (alfa-MSH) .Laba xakameynta iyo kicinta dareemayaasha neerfaha ayaa sii wada mashaariic dheeri ah oo xudunta u ah hypothalamus. Nucleus-ka 'Paraventricular nucleus' wuxuu ka kooban yahay melanocyte 4 receptors (MC4R) oo xakameynaya rabitaanka cuntada ee qiyaasta daaweynta lorcaserin hydrochloride wuxuu u dhaqmaa sidii xulasho 5-HT 2C agonist ah oo ku saabsan POMC neurons, taas oo markaa keenta sii deynta alfa MSH. Alfa dheeriga ah ee MSH wuxuu ku shaqeeyaa MC4R ee nukleus-ka nukleus ee hypothalamus, taasoo horseedaysa hoos u dhaca rabitaanka cuntada. Qiyaasaha supratherapeutic, lorcaserin hydrochlorider sidoo kale waxay ku shaqeysaa 5-HT 2B iyo 5-HT 2A reseptors.
Faa'iidooyinka of Lorcaserin Hcl budada (846589-98-8)
Lorcaserin HCL budada waa 5-HT2C gardaroole loo yaqaan 'agonist' oo loo maleeynayo in la yareeyo cuntooyinka laga qaato nidaamka POMC dhexe. Faa'iidooyinka budada Lorcaserin HCL:
Lorcaserin HCL budada waxaa loo isticmaalaa cunto iyo jimicsi si loo daaweeyo cayilka.
Lorcaserin HCL ayaa mararka qaarkood loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cayilka oo la xidhiidha sonkorowga, kolestaroolka sare, ama dhiig kar.
Lorcaserin HCL budo ma daaweyn doonto xaalad caafimaad oo hoose (sida cudur wadne, sonkorow, cadaadis dhiig oo sarreeya).
Lagu taliyay budada Lorcaserin Hcl (846589-98-8)
Budada Lorcaserin HCL waxay ku timaadaa qaab kiniin ah waxaana caadi ahaan la qaataa 1-2 jeer maalintii, iyada oo aan la cunin ama aan lahayn. Lorcaserin waa in loo isticmaalaa iyada oo la raacayo cuntada kaloriinta oo yaraatay iyo qorshaha jimicsiga.
Qiyaasta lagu taliyay ee budada lorcaserin hcl waa 10 mg oo afka laga qaato laba jeer maalintii. Lorcaserin waa la qaadan karaa iyadoon loo eegin cuntada. Lorcaserin hcl waa in laga joojiyaa bukaannada ku guuldareysta inay gaaraan ugu yaraan 5% miisaanka oo yaraada usbuuca 12 maadaama bukaanadani aysan u muuqan inay la kulmayaan miisaanka luminta macnaha leh ee daaweynta sii socota.
Dhibaatooyinka ay keento of Lorcaserin Hcl budada (846589-98-8)
Budada Lorcaserin Hcl waxaa loo isticmaalaa daaweynta maareynta culeyska daba-dheeraada ee dadka qaangaarka ah oo leh culeyska jirka (BMI) ee 30 ama ka weyn (cayilan) iyadoo lagu darayo cunno-karriin yar iyo jimicsi. Waxaa sidoo kale loo oggol yahay adeegsiga dadka waaweyn ee leh BMI-ga 27 ama ka weyn (miisaan culus) oo leh ugu yaraan hal xaalad oo la xiriirta miisaanka sida cadaadis dhiig oo sarreeya (dhiig kar), ama kolestarool sare (dyslipidemia). Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale yeelan kartaa xoogaa saameyn ah. Sida hoos ku xusan:
▲ TIsbedelada ugu caansan ee daaweynta:
-Hypoglycemia (sonkorta dhiigga yar).
▲ Waxyeellooyinka kale ee aan caadiga ahayn ee halista ah ee la xiriira lorcaserin waxaa ka mid ah:
-Ku xir dhibaatooyinka valfka,
-Kooxda dareenka ama xusuusta,
- Dhibaatooyinka maskaxda,
-Dabitaanka ama fikradaha isdilka,
-Ka fogow garaaca wadnaha,
-Kulalka dhiiga tira dhiiga, iyo
-In la kordhiyo hormoonka, prolactin.